I-ebook yasimahla: Ngaba uyayidlala iMidlalo yamanani? | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 6, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Siye sabhala malunga nendlela esachukumiseka ngayo Wonke umntu ukukhuthaza abasebenzi bakho ukuba bathengise uphawu lwakho ekuhlaleni. Emva kokwenza iposi, iqela lalapho laye lafikelela kum ndlebe nodliwanondlebe malunga namava am kwimidiya yoluntu. Bathathe iziphumo zolo dliwanondlebe baziphuhlisa incwadi entle onokuyikhuphela kwindawo yabo.
Ayisiyontle kuba imagi yam ikwiqweqwe:)… benze nje umsebenzi omkhulu ekubambeni ilizwi lam nokufomatha incoko ibe luluhlu olunemibuzo ngempendulo yam. Ndiphendula le mibuzo:
Bafuna ntoni abathengi bakho?
Uzijonga njani ukuba zeziphi iindlela onokuthi ujonge kuzo?
Ngaba ukubhloga kutshintshile kwaye kungena njani kwisicwangciso esipheleleyo?
Uchazwa njani umgangatho kwezi ndlela zonxibelelwano?
Kunjani ukukhula kwindawo ohlala kuyo?
Ithini imeko yangoku yemidiya yoluntu?
Umfumana njani umthengi oza kujolisa kuguquko ngaphezulu kwetrafikhi kunye nezinto azithandayo?
Yintoni ojolise kuyo kunyaka olandelayo? Zeziphi iinguqu ezinkulu ozibonayo emhlabeni?
Le ebook ngumbono olungileyo wento endiza kuthetha ngayo kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi ngasekupheleni kuka-Matshi. Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba uninzi lweendawo, iingcali kunye namaqonga ajolise ekufumaneni xa kufikwa kumajelo asekuhlaleni. Elona thuba lihle leendaba zosasazo ayifumaneki, kukugcina. Iinkampani zinethuba lokumamela kunye nokwakha ubudlelwane kunye nabathengi bazo.
Le ebook ifundeka ngokulula… ayingeni kulo naluphi na uhlobo lokuhamba komsebenzi wobugcisa okanye yalatha kuso nasiphi na isisombululo okanye ukudityaniswa okuya kukunceda. Sisikhokelo nje esikhulu sokufumana izimvo zam-ziphuhlisiwe ukusuka kwiminyaka yokusebenza kunye nabaxhasi bethu-ekuprintweni. Enkosi ku Wonke umntu ithuba lokufumana oku phaya! Bavelisa uthotho lwezi ncwadi zivela kwiinkokeli ezimbalwa kolu shishino- kubantu abanjengoSandy Carter, uAmy Tennison, uJason Falls, uChris Brogan, uJoe Pulizzi, uMari Smith nabanye.
Khuphela i-Ebook ngoku!
tags: UAmy TennisonUChris Brogandouglas karrebookwonke umntu kwezentlaloUJason uyawaUJoe PulizziMari SmithUSandy Carter
Intengiso yeendaba zeNtlalo kukusilela